‘ चार वर्षभित्र पाँच अर्बको आयात प्रतिस्थापन गछौं’ – Dainik Lumbini
मासुजन्य उद्योगपछि आलुका परिकार बनाउने उद्योग खोल्न लाग्नु भएको हो ?
दुई दशकदेखि म नेपालमा मासुजन्य उद्योगमा छु । त्यसअघि भारतमा रोजगारीको शिलशिलामा मासुजन्य उद्योगमा काम गरेँ । त्यहाँ गरेको काम र अनुभवको आधारमा यहाँ क्यालिटी मिट शपबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले मासु प्रशोधनको राम्रो र ठूलो उद्योगको रुपमा विस्तार भएको छ । अहिले क्वालिटी मासु प्रशोधन उद्योगले काठमाडौं, पोखरा, धरान, चितवनसम्म कुखुराका विभिन्न परिकार बनाएर बेच्दै आएको छ । यो उद्योग व्यवस्थित भएपछि केही नयाँ गर्ने सोंचअनुसार आलुका विभिन्न परिकार बनाउने उद्योग खोल्न लागेका छौं ।
आलुका परिकार बनाउने उद्योग खोल्ने योजना कसरी बन्यो ?
नेपालमा भारतका तीन र बेल्जियमको एक गरी चार कम्पनीका वार्षिक ६ अर्ब बराबरको फ्रेञ्च फ्राइज आएको देखिन्छ । यो भन्सार विभागको २०७७÷०७८को तथ्याङ्क हो । यो परिमाणकै हाराहारीमा गैरकानुनी बाटोबाट आइरहेको पनि छ । मैले भारतीय एक कम्पनीको अधिकृत वितरकको रुपमा काम गरिरहेको छु । विदेशबाट यति धेरै परिमाणमा आइरहेकोे छ भने हामी किन गर्न सक्तैनौ भन्ने प्रश्न मनमा उठ्यो । अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले यही उत्पादन गरी आयात बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजनाका साथ आलुका परिकार बनाउन फस्ट च्वाइस फुड्स प्रालि सञ्चालनको काम अघि बढेको छ । यहाँ हामीले आलुका ३५ परिकार उत्पादन गर्छौं ।
उद्योग स्थापना र सञ्चालनको काम कसरी अघि बढेको छ ?
उद्योगको पूर्वाधार शुद्धोधन गाउँपालिकाको फर्साटिकरमा निर्माण भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मुख्य मेसिन आइपुग्छ । बैशाखसम्म परीक्षण उत्पादन गर्ने र आगामी माघ–फागुनबाट नियमित चलाउने तयारी छ । हामीले ल्याएको प्लाण्ट जर्मनी प्रविधिको पहिलो प्लाण्ट हो । यो प्लाण्टले एकघण्टामा तीन टन प्रशोधन गर्न सक्छ ।
उद्योग नियमित चलाउन हामीलाई दैनिक ३० टन आलु आवश्यक पर्छ । फ्रेञ्च फ्राइज परिकारका लागि यहाँ उत्पादन भइरहेको जात आलु काम लाग्दो रहेन्छ । छुट्टै बीउ हामीले ल्याएर किसानलाई दिएका छौं । हामीले ल्याएको आलुको बीउ नेदरल्याण्डको एचजेडपीअन्तर्गत रहेको भारतको महेन्द्रा कम्पनीबाट एक सय मेट्रिक टन आलुको बीउ ल्याउन सफल भएका छौं । आलु खेतीमा किसानलाई अग्रसर गराउन चार सय घरपरिवारमा पुगेका छौं । आगामी वर्ष २ हजार घर परिवारमा पुग्छौं .
किसानको कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ ?
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको खरिद ग्यारेण्टी हुने हो र मूल्य पाउने हो भने उत्पादन गर्न अग्रसर हुन्छन् । हामीकहाँ किसानले उत्पादन गर्ने तर उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउने समस्या धेरै छ । त्यसैले कृषिकर्ममा लाग्नेहरु निराश भएका हुन् । हामीले किसानलाई उत्पादन गरेको आलु बजार मूल्यभन्दा दुई ÷चार रुपैयाँ बढी दिएर खरिद गर्छांै भनेका छौं ।
आलु उत्पादनका लागि कुन क्षेत्र रोज्नुभयो ?
आलु खेतीका लागि हाम्रो प्राथमिकता मुख्यतः लुम्बिनी प्रदेशको तराईका जिल्ला हुन् । दाङ र बर्दिया जिल्लाका किसानमा आकर्षण राम्रो छ । लुम्बिनी प्रदेशका केही पहाडी जिल्ला र अरु प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा पनि आलुको बीउको माग आएको छ । हामीले सुरुमा किसानलाई बुझाउन सकिंदैन् कि भन्ने थियो । अहिले किसानको धेरै माग आएको छ । आलुको बीउ वितरण गर्नुअघि गाउँपालिका र कृषि कार्यालयसंग समन्वय गरी किसानलाई तालिम दिएका छौं । कम्पनीसंग आलुसम्बन्धी लामो अनुभव भएका आलु विशेषज्ञहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले किसानलाई प्राविधिक सल्लाह दिइरहनुभएको छ ।
उद्योगको क्षमताअनुसार तपार्इंहरुले नेपालमै आलु पाउन सक्नुहुन्छ ?
नेपालमा फ्रेञ्च फ्राइज आलुको खपत पाँच हजार मेट्रिकटन छ । यो खपतलाई ख्याल गरेर प्लाण्ट राख्दैछौं । अहिले नै हामीले उत्पादन क्षमताअनुसार पूरा पाउन सक्तैनौं । किसानले मूल्य पाएपछि आलु उत्पादन गर्छन् । टिस्यु कल्चर ल्यावमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसो भयो भने नेपालमै आलुको बीउ उत्पादन गर्न सक्छौं ।
आन्तरिक बजारलाई मात्रै ध्यान दिनुभएको छ ?
तत्काल आन्तरिक बजारलाई मात्रै हो । किनकी आन्तरिक बजारको माग पूरा गर्नुपर्ने छ । २०८२ सम्म आन्तरिक बजारको मागलाई पूरा गरी आयात प्रतिस्थापन गर्छौं । त्यसपछि विदेश निर्यात गर्छांै ।
तीन तहका सरकारसंगको सहकार्य कस्तो छ ?
यो उद्योग सञ्चालनले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउँछ । तसर्थ सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसानले धेरै लाभ पाउन सक्छन् ।
हामीले सरकारी निकायबाट त्यस्तो कार्यक्रमका लागि अपेक्षा गर्दा वास्ता भएको छैन् । पहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चासो दिएको थिो । उद्योगका लागि ब्याज र बीउ अनुदानका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । पहिलका मुख्यमन्त्रीले धेरै चासो लिनुभएको थियो । अहिले प्रदेश सरकारमा नयाँ नेतृत्व आयो । नयाँ सरकार बनेसंगै पहिलेको सरकारले छुट्टयाएको बजेट कटौती भयो भन्ने जानकारी आएको छ । सरकार किसान लक्षित कार्यक्रममा गम्भीर भएन् ।
सरकारबाट तपाईंको के अपेक्षा छ ?
यो उद्योगको सफलता मेरो मात्रै सफलता होइन्, यहाँ आलु उत्पादन गर्न सके किसानले धेरै फाइदा लिनसक्छन् । आलुको खेती विस्तार गर्न सके विदेश जाने युवालाई यही रोक्न सकिन्छ । किसानलाई बीउ दिएका छौं । तालिम दिएका छौं । सरकारी निकायको सहयोग चाहेका छौं । सरकारी निकायको सहयोग हुने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ ।
अध्यक्ष, फस्ट च्वाइस फुड्स प्रा.लि.